Ngizihlela kanjani ngama-alfabhethi ku-WordPad? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > I-alphabetize ku-wordpad - izixazululo ezinkingeni
I-alphabetize ku-wordpad - izixazululo ezinkingeni
Ngizihlela kanjani ngama-alfabhethi ku-WordPad?
Ngeshwai-wordpadayinayo inkethohlungaiizwiphakathiUkulandelana kwama-alfabhethi; uzodingaIZwiamaprosesa ukuze bakwazihlungauhlu nomaamagamaungenengokulandelana kwezinhlamvu zamagama. Ungazama ukusebenzisa i-IZwi2007 kukhompyutha yamadodana akho ukuzehlungaiamagamaphakathingokulandelana kwezinhlamvu zamagama.Sep 19 2009
Kulesi sihloko sizobona ukuthi singalufometha kanjani isitayela se-MLA esicashunwe kuhlu lwe-MLA sisebenzisa iMicrosoft Word 2010. Sizobona ukuthi singakufometha kanjani kalula konke okufakiwe ohlwini olucashunwe eMisebenzini njengezindonga ezilengisiwe. Futhi singaluthola kanjani iZwi ekuhleleni lonke uhlu lwethu lwemisebenzi ekhonjiwe ngokulandelana kwama-alfabhethi.
Ake ngivule izigaba ezingaphrintiwe nezimpawu zesikhala ukuze sikwazi ukubona kahle izigaba esisebenza nazo. Futhi, mangivule irula eseceleni ukuze sikwazi ukubona ubukhulu bendima. Ngakho-ke lapha sibona isibonelo sohlu olufomethiwe lwesitayela se-MLA.
Isitayela se-MLA, uma ubhale i-eseyi oyifakile noma oyicaphune (okusho ukucashunwa ngqo noma okufingqiwe noma okufingqiwe) ... amagama omunye umuntu, izinsuku, imibono yasekuqaleni, noma imininingwane, KUFANELE wenze uhlu lwalabo abakhonjiwe Namathisela imisebenzi ngemithombo yalolu lwazi olubolekiwe.
Lolu hlu lwemisebenzi ekhonjiwe luvela ekugcineni kwendatshana futhi luqukethe uhlu lwemisebenzi noma imithombo ... (njengezincwadi, izindatshana, amawebhusayithi, njll.) Obolekwe endabeni yakho.
Ungawakha Kanjani Umthombo Onguyena Ongokoqobo Wokungena Emsebenzini Uhlu olucashuniwe luyisihloko esikhulu, esiyinkimbinkimbi senye indatshana. Ngemininingwane ephelele ngesitayela se-MLA, bheka iMLA Handbook for Writers of Research Papers. ukutholakala ku-http: //www.mlahandbook.org.
Ngizokhawulela le ndatshana ekuboneni nje ukuthi ungalisebenzisa kanjani iZwi 2010 ukufometha kalula futhi uhlele izigaba ohlwini lwemisebenzi ekhonjiwe. Ngakho-ke ake sibheke masinyane izici zokufomatha zalesi sampula sohlu lwemisebenzi ekhonjiwe. Okokuqala, siyaqaphela ukuthi isihloko sohlu lwe- “Works Cited” sisesigabeni saso uqobo, esigxile ekhasini.
Okwesibili, siyaqaphela ukuthi into ngayinye ohlwini isendimeni yayo. Into elandelayo esiyiqaphelayo ukuthi zonke izigaba ezikuhlu zishaywe kabili. Futhi azikho izikhala ezingezekile phakathi kwezigaba; uma ukungena kungaphezu komugqa owodwa, ulayini wesibili noma olandelayo wephuliwe futhi uhlohliwe ngo-1/2 intshi ukusuka kumugqa wangakwesobunxele.
Lesi sitayela sendima ethile saziwa njenge-indent yokulenga. Le fomethi isetshenziswa ohlwini lwemisebenzi ekhonjiwe ukuze sikwazi ukubona kahle amagama okugcina abalobi ukuze bahlukanise ngokubonakalayo okufakiwe ngakunye ohlwini. Ekugcineni, siyaqaphela ukuthi lonke uhlu luhlelwa ngama-alfabhethi ngamagama okugcina abalobi.
Okufakiwe kuhlu AKUKHO izinombolo. Futhi qaphela ukuthi okufakiwe AKUHLUKANISWANGA uhlobo lomthombo. Konke okufakiwe kuqukethwe ohlwini olulodwa.
Isibonelo, okufakiwe kokuqala okubili kulolu hlu kuyizincwadi eziphrintiwe ...... okufakwayo okwesithathu yindatshana ebhalwe phansi ku-anthology ...... ukungena kwesine kuphrinta enye incwadi ... ... ngenkathi Ukungena kwesihlanu kuyisichazamazwi, njll.
Ukukhombisa ukuthi sizifometha kanjani ngempela lezi zigaba emisebenzini ekhonjiwe, ake ngisondeze isithombe ukuze sikwazi ukubona zombili izinhlangothi zombhalo wethu oyisampula. Okukwesokudla yisibonelo sohlu lomsebenzi esibonisiwe esisanda kusibuka. Ngakwesobunxele, ngineqembu lezigaba ngaphandle kokufometha okukhethekile.
Izigaba zokufakwa kohlu ziqukethe 'i-dummy text' ukuze sikwazi ukugxila ekufomeni kwezigaba. Lapho sesiqedile, uhlangothi lwesobunxele luzobukeka lufana nolwesokudla. Okokuqala, ake sinikeze zonke lezi zigaba izikhala zomugqa ophindwe kabili.
Khetha zonke izigaba zezinto zohlu esifuna ukuzifometha ngokubamba phansi inkinobho yegundane lesobunxele ngenkathi uhudula igundane. (Ungakhetha futhi umbhalo ngokubamba phansi ukhiye weShift nangokuthepha izinkinobho zemicibisholo.) Bese uchofoza kwesokudla bese ukhetha Isigaba kusuka kumenyu evelayo ukuze ubonise ibhokisi lengxoxo leParagraph.
Ungafinyelela futhi ibhokisi lengxoxo lesigaba ngokuchofoza umcibisholo ezansi kweqembu lesigaba kuthebhu yasekhaya yeribhoni. Kuthebhu ye-Indents ne-Spacing, eqenjini lesikhala, setha isikhala somugqa ku-Double. Qiniseka ukuthi izilawuli zangaphambi nangemuva zisethelwe ku-zero.
Azikho izikhala ezingeziwe ngaphambi noma ngemuva kwezigaba zesitayela se-MLA. Chofoza OK. Ngichofoza noma yikuphi ukukhetha umbhalo.
Okulandelayo, sidinga ukugxilisa isigaba 'se-Works Cited' kusihloko. Ngichofoza kwenye indawo kuParagrafu, bese eqenjini leNdima ngichofoza isithonjana se-Center. (Ungasebenzisa futhi isinqamuleli sekhibhodi Ctrl + E ukufaka isigaba esikhethiwe.) Manje sidinga ukusebenzisa ifomathi ye-indent elenga kuzo zonke izigaba zezinto zohlu.
Okokuqala, sizokhetha zonke izigaba zohlu esifuna ukuzifometha, bese uchofoza kwesokudla bese ukhetha i-Paragraph kumenyu ye-pop-up ukuletha ingxoxo ye-Paragraph futhi. Kuthebhu ye-Indents ne-Spacing, eqenjini le-Induction, setha imenyu ekhethekile ku-Hanging. Ukusetha okuzenzakalelayo kwe-BY kufanele kube ngu-0.5.
Qaphela ukuthi ngezansi singabona ukubuka kuqala okuncane kwefomethi yesigaba njengoba sisebenza. Ukuhlehlisa kwesobunxele nakwesokudla kufanele kusethwe ku-0. Chofoza KULUNGILE futhi manje zonke izinto zethu zohlu zizovela njengezilenga izigaba ezifakwe ngaphakathi.
Umsebenzi wokugcina iZwi ongasenzela wona ukuhlunga zonke izigaba zezinto zethu zohlu ngama-alfabethi ngegama lokuqala esigabeni ngasinye. Ngiqale ngakunye kwalokhu okufakwayo kohlu lwedummy negama lomlobi ... isibongo sekoma isikhathi sokuqala segama.
Ngezigaba ezikhethiwe, iya eqenjini Lesigaba (Ithebhu Ekhaya) bese uqhafaza inkinobho ethi Hlunga ukuvula ibhokisi lengxoxo Yohlobo. Kokuhlunga ngesigaba, khetha Hlunga ngezigaba… Faka Umbhalo… nge-Ascending Order. Gcina okuzenzakalelayo, Akunasihloko.
Qhafaza KULUNGILE bese iZwi lihlela izigaba ngokulandelana kwama-alfabhethi. Inothi mayelana nokuhlunga ...
Qiniseka ukuthi ukhethe izigaba ngqo ofuna ukuzihlunga. Uma ungakhethi noma yiziphi izigaba, iZwi lizohlela ZONKE izigaba endabeni yakho ...
HHAYI okufunayo, ngiqinisekile! Nakhu ukuthi ungalufometha kanjani uhlu lwemisebenzi ekhonjiwe ngesitayela se-MLA usebenzisa i-Word 2010. Siyabonga ngokubuka.
Ngingakwazi ukubhala uhlu lwama-alfabhethi ku-NotePad?
Yebo, kukhona umsebenzi onjalo ezinguqulweni zakamuva kakhulu. Ukuthola isichazamazwihlunga(a-z), Sebenzisa inketho yemenyu Hlela -> Ukusebenza komugqa ->Hlungaimigqa isichazamazwi. Kunezinguqulo ezimbili - ukukhuphuka nokwehla.
Sanibonani bangani! Uyemukelwa ku-AppleFrendly! Namuhla ngizokuhambisa kuzo zonke izilungiselelo ezibalulekile zohlelo lokusebenza lwamaNothi ku-iPhone yakho. Lokhu kuzokusiza ukuthi usebenzise Amanothi ngempumelelo ku-iPhone yakho. Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale! Qalisa IZILUNGISELELO ku-iPhone yakho bese ubheka AMANOTHI, isethingi sokuqala ozodinga ukusisetha AMA-AKHAWUNTI OKUZENZEKA.
Lapha kufanele manje uthole wonke ama-akhawunti ahlukile asekela uhlelo lokusebenza lwamaNothi. Njenge-iCloud, i-Gmail, i-Yahoo, njll. Mina uqobo ngincoma ukugcina i-iCloud njenge-akhawunti yakho ezenzakalelayo njengoba amanothi wakho azovumelaniswa ngaphandle komthungo kuwo wonke amadivayisi we-Apple ane-akhawunti efanayo ye-iCloud.
Manje ukulungiselelwa okulandelayo KU-akhawunti yami ye-iPHONE. Uma wenza lokhu kusebenza kusebenze, kuzokwakhiwa ifolda eyengeziwe kuhlelo lokusebenza lwamaNothi. Amanothi akule folda awavumelanisiwe phakathi kwamaseva we-iCloud futhi ahlala e-iPhone yakho kuphela.
Ngingancoma ukuthi ucishe le switch njengoba ungalahlekelwa amanothi akho uma angavumelaniswa ne-iCloud futhi kwenzeka okuthile okubi ku-iPhone yakho. Umbhede Ukugcina amanothi akho evunyelaniswa ne-iCloud. Kuzilungiselelo ezilandelayo ungakhetha isethingi ezenzakalelayo yokuhlunga amanothi akho.
Engikuthandayo kungu-EDITED DATE, ngoba ngingahlala nginenothi lami lokugcina elihleliwe phezulu ohlwini, ungakhetha noma yini oyifunayo. Isethingi elandelayo QALA AMANOTHI AMASHA NO. Lapha ungakhetha ifomethi ejwayelekile yamanothi amasha.
Une-TITLE, HEADING, ne-BODY. Noma ngubani ongawazi umehluko, nakhu amafomethi ahlukile abukeka. Ungashintsha lawa mafomethi nganoma yisiphi isikhathi kuhlelo lokusebenza lwamaNothi.
Ngakho-ke ukulungiselelwa okukhethwayo lapha kunguMZIMBA. Manje ukulungiselelwa okulandelayo kungo-LINES NE-GRID. Le migqa namagridi ayasebenziseka ekubhaleni ngesandla nasekudwebeni kuhlelo lokusebenza lwamaNothi.
Isibonelo, lokhu kubukeka kanjani ngendwangu lapho kubhalwa ngesandla kumanothi. Isethingi elandelayo manje YI-PASSWORD. Lokhu kuyilungiselelo engilithandayo kuhlelo lokusebenza lwamaNothi futhi ngincoma kakhulu ukuvikela amanothi akho abalulekile futhi ayimfihlo ngephasiwedi.
Kufanele futhi usebenzise i-Touch ID noma i-Face ID ukubuka amanothi akhiyiwe, manje usulungele ukuhamba ngezindlela ezi-2 ezihlukile. Shintsha iphasiwedi bese usetha kabusha iphasiwedi. Lokhu okubili kwehluke kakhulu futhi nginezinkomba zesinyathelo ngasinye zezilungiselelo zephasiwedi kuhlelo lokusebenza lwamaNothi.
Kuyisifundo esihle futhi ngincoma wonke umuntu ukuthi ahlole ukuthi ngabe ufuna ukwazi umehluko ngqo phakathi kwalezi zinketho ezimbili. Ngizobeka isixhumanisi sokufundisa kuwo womabili amakhadi nencazelo engezansi. Bheka lokho.
Manje ukulungiselelwa okulandelayo esinakho KULONDOLOZA IZITHOMBE. Kunconywa ukuthi uyigcine inikwe amandla ngoba noma iziphi izithombe ozithathe kuhlelo lokusebenza lwe-Amanothi zizolondolozwa kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-Izithombe. Ngakho-ke uhlala unesipele sezithombe kuhlelo lwakho lokusebenza lwezithombe.
Manje ukulungiselelwa kokugcina esinakho UKUFINYELELA AMANOTHI KUSUKELA ISIKHUNGO SE-LOCK, lapha unezinketho ezi-3 ezihlukile. Ungayishiya ivaliwe noma ungahlala wenza inothi elisha noma kunini lapho ufinyelela amanothi kusuka kusikrini sokukhiya. Lokhu kusiza ukuthatha amanothi ngokushesha ngaphandle kokuvula i-iPhone yakho ukulungiselelwa KUYAQHUBEKA.
Lokhu ngeke kudale inothi elisha uma uchofoza. finyelela kumanothi kusuka kusikrini sokukhiya, kunalokho kuzoqala inothi langaphambilini olifinyelele ngokususelwa kokuthandayo, unezilungiselelo ezi-2 lapha, noma ungaqhubeka nenothi lokugcina olenzile esikrinini sokukhiya NOMA ungakhetha eyokugcina Qaphela ukuthi ibukwe kuhlelo lokusebenza lwamaNothi. Unezisetho ezingeziwe kuzo zombili izinketho.
Isibonelo, uma ufuna ukuqhubeka nenothi lokugcina olenzile esikrinini sokukhiya, ungakhetha isikhathi ngemuva kwalokho okuzokwakhiwa ngaso inothi elisha esikhundleni sokuqala inothi elidala elifanayo. Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna ukuqhubeka nenothi lokugcina obelibheka kuhlelo lokusebenza lwamaNothi, kufanele ukhethe isikhathi ofuna ukusibuzwa ngephasiwedi ukuze ubuke amanothi akho. Njalo kungcono.
Kepha uma wena phakathi kwalaba bobabili ngincoma ukukhetha INDLELA YOKWENZA INDAWO ENTSHA yokukhetha ubumfihlo nokulula! Futhi lokho kungiletha ekugcineni kwendatshana. Ngiyethemba ukuthi lokhu kusiza ukusetha izilungiselelo zezilungiselelo zohlelo lokusebenza lwamanothi ku-iPhone. Uma ukuthole kuwusizo, yazi emazwaneni angezansi.
Futhi wabelane ngayo nabangani bakho nabathandekayo. Sizokubona maduze kokulandelayo. Le VIKAS, uphawu.
Ngingazifaka kanjani ngokuzenzakalela ngama-alfabhethi eZwini?
Hlunga uhlu ngama-alfabhethi ku-IZwi
Khetha uhlu ofuna ukuluhlunga.
Iya Ekhaya> Hlunga.
Hlela Hlunga Ngezigaba Nombhalo.
Khetha Ukukhuphuka (A kuye ku-Z) noma Ukwehla (Z kuye ku-A).
Ungakwazi yini ukufaka amalebula wamakheli e-alfabhethi ku-Word?
Qhafaza kabili ifayela lomthombo wedatha eliqukethe ifayela lakho le-ilebulaokuqukethwe (njengamagama kanyeamakheli okuposa). Iya engxenyeni ethi 'Cwenga uhlu lwabamukeli' ebhokisini lengxoxo le 'Mail Merge Abamukeli' bese uqhafaza 'Hlunga. '
Sanibona bantu bakithi, namhlanje ngizonikhombisa ukuthi niziphrinta kanjani amalebula amakheli nge-Microsoft Word. Sizosebenzisa uhlobo lwamalebula anamathelayo ongawathenga kunoma yisiphi isitolo sokubhala noma ku-inthanethi futhi uma ungakathenganga noma yimaphi amalebuli lokho kumnandi ngoba ngizokunikeza amathiphu wokuthi yimaphi amalebuli owathengayo, wona Ngizoba ne-Microsoft Word ehambisanayo futhi yize ngizobe nginyathelisa amakheli kumalebula ami, ngizokukhombisa ukuthi ungasebenza kunoma yini enhle kakhulu, njengokufaka ilebula lezimbiza zakho zejamu noma i-homebrew yakho empeleni ngenze izindatshana ezimbili ngale ndaba. , kule ndatshana ngizokukhombisa ukuthi ungalisebenzisa kanjani iZwi ukubeka noma yini oyifunayo eshidini lelebula futhi ngenze enye indatshana lapho ungasebenzisa khona i-Excel ukuhlanganisa uhlu lwamakheli bese usebenzisa iZwi ukufaka lawo makheli kumalebula akho Wokuphrinta . Ngakho-ke uma ufuna ukusebenzisa uhlu lwe-Excel, hlola le ndatshana.
ikhodi yephutha 8024401c
Izindlela engizokukhombisa zona ziyasebenza, uma unekhompyutha ye-Windows noma iMac, ngizokwenza lokhu ku-Wi yami. khombisa ama-ndows computer, kepha kufanele ukwazi ukulandela umkhondo weziningi zazo uma une-Mac. Ungakhohlwa, uma ungathanda ukuthi ngiphendule imibuzo yakho mayelana nobuchwepheshe, ungabashiya kumazwana angezansi futhi sicela uthinte inkinobho ethi 'Bhalisa' ngakho-ke ake siqale Ngaphambi kokuthi uqale, ake sikunikeze izeluleko Ingakusindisa enkingeni ethile.
Khetha amalebula angakwesokudla eza ngobukhulu obuhlukahlukene futhi iZwi lidinga ukwazi ukuthi ungawubeka kuphi umbhalo ekhasini ukuze amalebula akho ngamunye aphrinte kahle ukuze athole ilebula elilula futhi elihamba phambili. Abakwa-Brands bafaka ikhodi yomkhiqizo egameni elithi Packaging Ungakhetha le khodi uma ngabe wenza amalebuli ngomlomo ngakho-ke lawa ubukhulu obunembile bamalebula akho ngakho-ke ake sibheke ngokushesha ukuthi ungabheka kanjani ukuthi yimaphi amalebula akhona vula igama bese uqhafaza Umbhalo ongenalutho ubheke iribhoni ukuze uthumele ngeposi chofoza kokuthunyelwe bese uchofoza kumalebula chofoza manje kuzinketho futhi kufanele ubheke ibhokisi elinjengaleli. Uma usebenzisa i-Mac akudingeki ucindezele Izinketho nathi we Uma ungafuni ukubona ama-brand, thola abahlinzeki belebula bese uchofoza le Imikhiqizo enelebula ebhokisini lokudonsa le-Mac.
Ngakho-ke uma ufuna amalebula, qiniseka ukuthi uthenga enye yale mikhiqizo. Ngizokukhombisa engikwenzile ngiyazi ukuthi u-Avery uwuphawu oluhle engiye kulo e-Amazon ngafuna amalebula ka-Avery. Ukushaya kokuqala kube yilezi amalebula.
Kunamalebula angama-21 eshidini elilodwa angosayizi ophelele wamalebula okuposa. Kunekhodi yomkhiqizo ngaphambili kwepakethel71 60 ukuze sibuyele emuva ezwini bese sibheka izinombolo zomkhiqizo ngaphansi kwe-Avery enkulu i-l71 60 isohlwini ngakho lawa amalebula azokwenza umsebenzi engi-ode lawa malebula kwavela ukuthi wenze umsebenzi omuhle impela futhi uma ufuna ukuwathenga ngifaka isixhumanisi se-Amazon encazelweni engezansi yamaphrinta e-laser futhi ngine-inkjet iphrinta kodwa akubonakali kunomehluko, zisebenza kahle ngakho ake sibone ukuthi singaphrinta kanjani lawa malebula okumele abe kubhokisi lebhokisi ngegama uma kungenzeka ukuthi uphuthelwe okokuqala bese amalebula chofoza izinketho bese uthola umkhiqizo wakho ohlwini lwabaphakeli bese usesha uhlu olude bese uqhafaza inombolo yomkhiqizo ophonsayo Bheka ngokushesha ukuze uqiniseke ukuthi lezi ubukhulu bufana nobukhulu bamalebula akho lapho ngasizathu simbe ungeke ukwazi ukuthenga amalebula angasekelwa yi-Word namanje ngesandla faka izilinganiso ungachofoza ilebula elisha bese ugcwalisa yonke imininingwane lapha kepha awufuni ngempela ukukwenza lokho i izokukhansela lokhu bese ibuyela ku- myAvery- Namathela kumalebula bese uqhafaza KULUNGILE Leli bhokisi limele amalebula ami ngokulandelayo ngizokukhombisa ukuthi ungaphrinta kanjani into efanayo kulebula ngalinye eshidini, kusobala ukuthi lokhu akuyona into ofuna ukuyenza ngokuhamba kwesikhathi endatshaneni IMac by the way, kepha engxenyeni elandelayo yendatshana ngizocofa kulelo bhokisi lamakheli bese ngifaka ikheli ngendlela wonke amagama namakheli akule ndatshana angamanga ngayo ngivele ngawathola ku-online generator Uqinisekile ukuthi ulitholile ikheli kahle bese sizokufaka lokhu kumalebula wokuguqula. Manje usungaziphrinta ngokushesha lapho ufuna, kepha ngichofoza ku-New Document futhi kukhona amalebula wethu, uma ufuna ukushintsha isitayela sombhalo manje usungavele ukhethe wonke umbhalo bese wenza lonke ushintsho, z.
B. Ungawushintsha usayizi wombhalo futhi uwenze ube nesibindi, kepha ngizowushiya njengoba wawunjalo bese kuthi lapho usukulungele ukuphrinta uchofoze Ifayela bese uphrinta bese ngikukhombisa ngokuhamba kwesikhathi le ndatshana yokuthi ukuphrinta kahle amalebula akho. Manje ngizokukhombisa izindlela ezimbalwa zokuthayipha amalebula akho ngamunye ngamunye ukuze ngiqale yonke indawo ngombhalo omusha ongenalutho ngibuyele ebhokisini lelebula, chofoza i-Mailings, bese kuthi Amalebula, bese ucabanga nge-Avery amalebula esiwasebenzisile.
Lokhu kuhle, engikuthola kusiza, uma nje ufuna ukuphrinta ilebula elilodwa ungakhetha ilebula ngqo eshidini ofuna ukulisebenzisa. Kuhle uma ufuna ukusebenzisa kabusha i-sti esele esele inamalebula angenalutho kuwo, uvele ukhethe ilebula elilodwa bese ukhetha umugqa nekholomu yelebuli ofuna ukuyiphrinta ilebula elifanayo kepha ungafaki lutho ku Inkambu yekheli chofoza ku-New Document futhi unekhasi elihlukaniswe laba amalebula angenalutho ongachofoza kunoma iyiphi indawo yelebula bese uqala ukuthayipha ngizobeka ikheli elihlukile kulebula ngalinye uma ngabe amalebula abukeka kanjena kodwa uthanda , ungaziphrinta ukuze uchofoze kufayela bese uyaphrinta futhi uma usuqedile chofoza ukuphrinta manje lapho ngiphrinta amalebula ngithanda ukukhipha wonke amaphepha angenalutho kuphrinta yami bese ubeka ishidi elilodwa lamalebula kulo elilodwa, noma ngabe uphrinta amashidi amaningi, amaphrinta amaningi azokutshela ukuthi ufake elinye ishidi lapho elokuqala liphrintwa ukuze ukwazi ukufaka elinye iphepha. Awufuni ukubeka engozini iphrinta ehlafuna iphepha lakho noma icosha amaphepha amabili ngasikhathi sinye.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kukusizile ukuthi uprinte amalebula akho. Ngicela ungitshele ukuthi nihlalisene kanjani kumazwana angezansi futhi uma uthole le ndatshana ilusizo ngicela unikeze isithupha sakho uma ufuna ukubona ezinye izifundo ezivela kimi, chofoza ebusweni bami ngezansi bese uchofoza inkinobho ebomvu ethi Subscribe bese uthi ' khohlwa ukubheka enye indatshana engisanda kuyenza ukuthi ungaluprinta kanjani uhlu lwamakheli kusuka ekuvelele kumalebula ngiyabonga ngokubuka futhi ngizokubona ngokuzayo
Ungalufaka kanjani uhlu lwama-alfabhethi ku-Microsoft Word?
Ukubeka uhlu ngama-alfabhethi ku-Word, sicela uzame lezi zinyathelo: 1 Gqamisa lonke uhlu ofuna uku-oda ngegundane lakho. 2 Qiniseka ukuthi ukwithebhu yasekhaya phezulu bese ubheka kuphaneli Yesigaba. ... 3 Hlunga umbhalo ngoku-Ascending order futhi lokhu kufanele kukufake ngama-alfabhethi.
/ Ungahlela kanjani izithombe ngama-alfabhethi ku-Microsoft Word?
Hlunga imenyu yezintandokazi zomhleli we-registry enezinhlamvu noma enamachashaza kumagama e-microsoft yini izesekeli ze-processor yamagama kudeskithophu kuma-windows 8 s kanye namatafula kwigama le-microsoft Where Is The Sort On In Microsoft Word 2007 2010 2016
Uhlela kanjani uhlu lwamagama?
Cindezela KULUNGILE ukuhlunga uhlu. Vula ifayela ofuna ukulihlunga. Ungakopisha futhi unamathisele uhlu lwamagama ofuna ukuwahlela kudokhumenti. Ukuze amagama abhalwe ngama-alfabhethi, adinga ukufomethwa njengohlu, okufakiwe ngakunye kulayini wawo. Khetha umbhalo ofuna ukuwuhlunga.
Ingabe likhona ithuluzi lokuhlunga umbhalo ngokulandelana kwezinhlamvu zamagama?
Ithuluzi Eliku-inthanethi Lama-alfabhethi | Hlunga Imigqa Yombhalo, Hlunga Uhlu Lombhalo, Hlela Uhlu Ngokwezinhlamvu Zamagama, Ngokubala, Ngokwemvelo..Ithuluzi Loku-oda Lama-alfabhethi lamahhala. Ku-inthanethi, ukuhlela ngama-alfabhethi (amagama noma imishwana) ngokulandelana kwama-alfabhethi. Ngokwe-alfabhethi | Okwemvelo | Ngokwezibalo | Ukubuyela emuva | Okungahleliwe | Intambo | Faka kuhlu uhlu lwe-Excel, i-NotePad ++ Plain Text Filter.